Debrung 4 Rooms-DISICED PHAMBI KONKE UKUHLALA
Gqibezela ngomfanekiso ogqibeleleyo kunye nezinto zangaphakathi ezipholileyo, le villa iyilwe ngokwesitayile ikubeka encotsheni yeentaba, ikunika yonke into oyiphuphayo kwiholide efanelekileyo.
Emva kokuba uqale usuku lwakho ngekhabhathi eshushu kwi-terrace sit-out, ungashukuma kancinci uye kwi-gazebo kwiseshoni yemidlalo yebhodi yasemva kwemini, kwaye ekugqibeleni uphelise usuku lwakho lokuncokola malunga nomlilo.
Kungakhathaliseki ukuba yeyiphi na indawo yendlu onokuba kuyo, umbono okhwankqisayo sisithembiso esipheleleyo!
- Kukho amagumbi okulala ama-4 - onke akumgangatho ophantsi.
- I-TV, i-kettle yombane kunye neendawo zokuhlambela eziqhotyoshelweyo zinikezelwa kuwo onke amagumbi.
- Onke amagumbi aneebhedi ezinobukhulu bokumkanikazi. Ngaphandle koko, amagumbi ama-2 aneebhedi zesofa-cum.
- Izifudumezi zinokubonelelwa ngokwemfuno.
- Kukho iindawo zokuhlambela ezi-5 kwi-villa - i-4 iqhotyoshelweyo, i-1 eqhelekileyo
- Kukho igadi ye-terrace kumgangatho wesibini, kunye ne-lawn eyenziweyo kunye ne-gazebo. Iindwendwe kuya kufuneka zithathe izinyuko ukufikelela okufanayo.
-Inokuhlala abantu abangama-25 ngokukhululeka.
- Kukho i-nursery encinci esekwe kwingca.
- Kukho igumbi lokuhlambela eliqhelekileyo kumgangatho ophantsi.
- Iindwendwe azikwazi ukufikelela ekhitshini.
- Iindwendwe zinokuqesha umpheki womnini ukuba alungiselele ukutya nge-Rs 300 ngosuku.
- Ikhitshi ixhotyiswe nge-oven, isitovu segesi, isihluzo samanzi, i-toaster, i-induction plate, i-mixer-grinder, ifriji kunye ne-microwave.
- Ukusetyenziswa kwenyama yenkomo kunye nengulube akuvumelekanga.
Isikelelwe ngesibhakabhaka esinamabala amaninzi kunye neendlela ezigobhozayo ezindulini, iGangtok yindawo yokuphupha kubathandi beentaba. Ngomxube ogqibeleleyo wokufudukela ezidolophini kunye nobunyani benkcubeko, iGangtok iyenzela enye yezona zikhululo zintle zeenduli ezinobuhle bendalo obuyingqongileyo. Ke, ngelixa ukonwabela ukuhlala kwakho ngoxolo eDebrung-A Boutique Homestay, nazi iindawo ezimbalwa ezikufutshane kunye nemisebenzi esiyicebisayo ukwenza ukuhlala kwakho kukhumbuleke ngakumbi.
-Ndwendwela iPemayangtse Monastery enomtsalane.
-Jonga ubuhle obungenakuthelekiswa nanto beSeven Sisters Waterfall.
-Ukufumana ulonwabo lokukhwela iYak.
-Solisa amehlo akho ngokutshona kwelanga okumangalisayo eTashi View Point.
-Thenga intliziyo yakho kwiMG Road.
Izimvo eziyi-1 069
Umamkeli ukhona kwipropati kwaye uhlala efikeleleka. Abasebenzi aba-5 nabo bakhona ukuze basombulule naziphi na iinkxalabo kwaye bakuncede ube nokuhlala ngokugqibeleleyo.